Ilegharị Anya n’Alaka Ụlọ Ọrụ Ndịàmà Jehova Dị na Venezuela
A na-asụgharị akwụkwọ anyị ndị e ji amụ Baịbụl n’Asụsụ Ndị Ogbi nke Venezuela. Kwa ọnwa, a na-ebupụkwa akwụkwọ ga-eju ihe fọrọ obere ka ọ bụrụ gwongworo atọ. A na-ebi ha n’asụsụ iri abụọ na itoolu. A na-ahazi ọrụ Ndịàmà Jehova karịrị otu narị puku na puku iri abụọ na ise na-arụ na Venezuela.
Ilegharị Anya n’Alaka Ụlọ Ọrụ Dị na Venezuela